Lionel Messi oo la shaaciyey mudada uu garoomada ka maqnaan doono kaddib dhaawacii xalay soo gaaray kulankii Atletico – Gool FM
Owen Hargreaves oo maamulka Man United u jeediyay talo muhiim ah ee ku aadan Odion Ighalo
Ryan Giggs oo shaaca ka qaaday xiddigii ugu fiicnaa uu la saaxiibay xirfadiisa kubadda cagta
CIID WANAAGSAN: Gool FM oo ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyaynaysa munaasibadda Ciidul Fitriga
Ma ahan PSG, Real Madrid iyo Barcelona, Manchester United oo loollan adag kala kulmeysa dagaalka Jadon Sancho
La Gazzetta dello Sport oo baahiyay qorshaha Arthur, inuu is baddelay go’aankiisa iyo halka ay marayo wadahadalka Juventus iyo Barcelona
“Erling Håland wuxuu gaari karaa heerka Ronaldo” – Rivaldo
Mid ka mid ah kooxaha waa weyn ee Yurub oo dalab xoogan ka soo gudbisay Aubameyang
Halyey Barcelona ah oo kula taliyay Gareth Bale inuu ka tago kooxda Real Madrid
“Eden Hazard wuxuu ku guuleysan karaa abaal-marinta Ballon d’Or”
“Ronaldo waa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan taariikhda” – Sami Khedira oo si weyn u ammaanay Cristiano
Lionel Messi oo la shaaciyey mudada uu garoomada ka maqnaan doono kaddib dhaawacii xalay soo gaaray kulankii Atletico
Haaruun September 22, 2016
(Barcelona) 22 Sebt 2016 – Waxaa la shaaciyey in Lionel Messi uu garoomada ka maqnaan doono muddo saddex usbuuc ah, kaddib markii uu dhaawac gumaarka ah soo gaaray kulankii xalay kooxdiisa Barcelona barbaro 1-1 la dhaafi waysay Atletico Madrid ee La Ligaha Spain.
Weeraryahanka reer Argentina ee Lionel Messi ayaa la bedelay daqiiqaddii 59-aad ee qeybtii labaad kaddib markii uu jilaafo xun kala kulmay Diego Godin, waxaana lagu bedelay Arda Turan.
Inkastoo Messi lagu qasbay inuu dhaawac gumaarka ah ku seego kulankii isreeb-reebka Koobka adduunka 2018 oo uu xulkiisa Argentina la dheelay horraantii bishaan xulka Venezuela ayaa haddana ciyaaray dhammaan shantii kulan ee horyaalka La Ligaha Spain oo ay ciyaartay kooxdiisa xilli ciyaareedkan.
Messi waxa uu seegi doonaa kulamo ay ka mid yihiin Borussia Monchengladbach oo ay Champions League kula ciyaarayaan, Sporting Gijon iyo Celta Vigo oo ay La Liga kula kula ballansan yihiin iyo kulammada isreeb-reebka Koobka Adduunka 2018 ee xulkiisa uu la dheelayo Peru iyo Paraguay.
Xiddiga reer Argentina ee Messi ayaa ku soo laaban kara kooxda Barcelona kulanka Champions League ee ay 19-ka bisha October la ciyaarayaan kooxda Manchester City ee waddanka Ingiriiska.
[BREAKING NEWS] Leo Messi has groin strain in his right leg and he will be out for around 3 weeks pic.twitter.com/LrzDbsgqM6
— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 21, 2016
Isku aadka wareegga afaraad ee League Cup oo la sameeyey… (Man United iyo Man City oo madaxa isla galay)
Kabtanka Man City Vincent Kompany oo dhaawac cusub uu soo gaaray kulankii ay xalay ka adkaadeen Swansea City